Ikozvino kune mirwi yemeseji masevhisi akatenderedza, asi WhatsApp ine matutu emaficha uye anonyanya kushandiswa zvakanyanya - iyo Facebook-inomiririra app inoti ine vanopfuura mabhiriyoni maviri vashandisi pasi rese, zvinova zvinokatyamadza.
Saka heano mamwe akavanzika matipi iwe aungangodaro usazive nezvake, akasanganiswa mune mashoma akajairwa matipi eaya matsva kune WhatsApp.
• Akanakisa nhare mbozha
WhatsApp general matipi uye manomano
Tumira nzvimbo yako kune waunosangana naye
WhatsApp inokutendera kuti utumire mafoto nemavhidhiyo kune vanobata, pamwe nekugovana munhu wekubata kana gwaro, asi unogona zvakare kutumira nzvimbo yako. Izvi zvinonyanya kubatsira kana uchisangana neshamwari kumwe kunhu, kunyanya kana ukasarudza Kugovana Nzvimbo Yekugara, iyo inobvumidza yako yekuonana kuti uone yako Live Nzvimbo kwenguva yaunosarudza kuti vakwanise kukutevera. Nguva yenguva yakatarwa pamaminetsi gumi nemashanu, 15 awa kana maawa masere.
iOS: Chat> Yakanangana nhaurwa> Tinya pa "+" kuruboshwe kwebhokisi remashoko> Nzvimbo> Goverana Rarama Nzvimbo> Sarudza nguva yakatarwa.
Android: Chat> Yakanangana nhaurwa> Tinya paperclip kurudyi kwemessage bhokisi> Nzvimbo> Goverana Rarama Nzvimbo> Sarudza nguva yakatarwa.
Unogona kuona wese wauri kugovana nzvimbo yako yekugara nekuvhura Zvirongwa> Akaunti> Yakavanzika> Rarama Nzvimbo.
Tsvaga machats ako ese
Mumwe munhu anogona kunge akakutumira kero yake kana iwe ungayeuke uchitaura nezvechimwe chirongwa kana firimu asi iwe haudi kupururudza kuburikidza neyako meseji kuyedza kutsvaga zvauri kutsvaga. Pamusoro pekutaura kwako kwese paIOS pane yekutsvaga bar. Vhura Android, pane chiratidzo chekutsvaga.
Unogona kutaipa chero chinhu mubha yekutsvaga, kubva pakutanga kwezita reguta kana iwe uchitsvaga kero kune rimwe izwi uye meseji dzese neshoko iro dzinozoonekwa pazasi semamwe mameseji. Paunobaya pabha yekutsvaga, iwe uchaonawo runyorwa rwezvingasarudzwa, kubva paMifananidzo kuenda kuAudio, zvichikubvumidza kuti utsvage kutsvaga kwako.
Kudzvanya pamhedzisiro yacho kunozokutora iwe uende kuchikamu icho chehurukuro yekutaura yawaive nayo.
Tsvaga imwe hurukuro
Kana iwe uchida kutsvaga chaiyo yekutaurirana kwete pane ako ese ehurukuro, izvi zvinogoneka futi. Pamwe iwe wakaita hurukuro nezve imwe nzvimbo yemusangano, kana ivo vakakutumira yavo imwe yekufona nhamba kana yavo kero semuenzaniso.
iOS: Chats> Yakananga nhaurwa> Tinya pane ruzivo rwekutaurirana kumusoro> Chat Chat> Type mubha yekutsvaga inoonekwa kumusoro kweiyo chaiyo chat.
Android: Chats> Yakananga kutaura> Vhura menyu kumusoro kurudyi> Tsvaga> Type mubha yekutsvaga inoonekwa kumusoro kweiyo chaiyo chat.
Ita vhidhiyo kana izwi kufona uchishandisa WhatsApp
WhatsApp haisi yekungotumira mameseji, unogona kuishandisa fonera vhidhiyo nenzwi zvakare. WhatsApp kufona inoshandisa yako internet kubatana pane yako chirongwa maminetsi.
iOS & Android: Chats> Yakananga hurukuro> Dhinda icon yekufona kana vhidhiyo icon mune yepamusoro kurudyi kona.
Tsvaga waunonyanya kutaura naye
Ndiani chaizvo munhu waunofarira? Zvinogona kunge zvisiri izvo zvaunofunga. Pane nzira yekutsvaga vanhu vaunotumira mameseji mazhinji uye uye kuti yakawanda sei yekuchengetedza munhu wega yaanotora, pakati pezvimwe zvinhu.
iOS & Android: Zvirongwa> Kuchengeta uye Dhata> Manage Kuchengeta> Uchaona runyorwa rwevanofambidzana pazasi kuitira kuti irikushandisa zvakanyanya kuchengetedza.
Kurumidza kudzima ese mafoto, maGIF, mavhidhiyo, mameseji kana zvitambi kubva kune imwe chat
Izvo zvinokwanisika kudzima ese mameseji, mapikicha, kana mavhidhiyo, maGIF, vanofambidzana, nzvimbo, meseji meseji, zvinyorwa uye zvitambi mune imwe chat. Semuenzaniso, unogona kudzima meseji dzese mune yakatarwa yekukurukura kana yeboka chat, asi siya zvese mafoto.
iOS & Android: Zvirongwa> Kuchengeta uye Dhata> Manage Kuchengetedza> Sarudza Bata> Manage> Sarudza> Ratidza mabhokisi ari padyo neizvo zvaunoda kudzima (mavhidhiyo kana mifananidzo)> Tinya pabhini kuti ubvise.
Izvo zvinokwanisika kuronga nemafaira api ari kutora mukamuri yakanyanya, iyo nyowani uye yekare kudhara kana ukabaya denderedzwa mukona yezasi yezasi mushure mekubaya panhare.
Kurumidza kuongorora uye kudzima zvinhu kuti ubatsire kujekesa kuchengetedza
WhatsApp yaita kuti zvive nyore kubata izvo zviri kutora kuchengetedza pane yako kifaa. Kwete chete iwe kwaunogona kuona kuti ndedzipi hurukuro dzinonyanya kuchengetwa sezviri pamusoro, asi iwe unogona zvakare kuona kuti ndeapi mafaira akakura kupfuura 5MB uye ndeapi mafaira akaendeswa kanoverengeka.
iOS & Android: Zvirongwa> Kuchengeta uye Dhata> Manage Kuchengeta. Pasi pechikamu cheKuongorora uye Bvisa Zvinhu unogona kudzvanya pane iri rakakura kupfuura 5MB tebhu kana iyo yakatumirwa kanoverengeka tebhu wobva wasarudza iwo aunoda kudzima. Sezvakangoita hurukuro dzega, unogona kugadzirisa nekutepa padenderedzwa mukona yezasi yekuruboshwe.
Sevha yako data mvumo
Kana iwe uine yakaganhurirwa dhata yemubhadharo, haudi WhatsApp kuibvisa yese kure. Nekutenda, iwe unogona kugadzirisa kana midhiya ichibvumidzwa kurodha pasi, pamwe nekuona kuti mafoni anoshandisa diki dhata sezvinobvira.
iOS & Android: Zvirongwa> Kuchengeta uye Dhata> Media Auto-Dhawunirodha> Chinja kuWi-Fi chete pasarudzo imwe neimwe yekuchengetedza data rako.
Tsvaga kuti yakawanda sei data yauri kushandisa
Kana iwe uchinetseka nezvekushandisa kwako dhata, unogona kutsvaga chaizvo kuti uri kushandisa zvakadii. Iwe unozowana kuputsika kwehuwandu hwehuwandu hwekutumira uye kugamuchirwa mameseji, pamwe nedata rakatumirwa uye kugamuchirwa.
iOS & Android: Zvirongwa> Kuchengeta uye Dhata> Kushandisa Network.
Shandisa WhatsApp pawebhu uye desktop
WhatsApp haina kuganhurirwa kune yako mbozhanhare. Kune webhu app inobvumirana zvese kubva kufoni yako uye kune desktop desktop zvakare. Enda ku https://web.whatsapp.com/ kana kukopa iyo desktop desktop kubva ku whatsapp.com/download/
Iwe unozofanirwa kuvhura WhatsApp pafoni yako> Zvirongwa> WhatsApp Web / Desktop> Skena iyo QR kodhi pane browser kana Desktop app> Tevedza rairo.
Zvese zviri zviviri webhu uye desktop desktop zvinoshandira kumusoro chats uye chenjedzo pakombuta yako, zvichikubvumidza iwe kupindura nekukurumidza uye nyore. Foni yako inoda kuzobatana kuti ishande kunyange zvakadaro kana iwe ukarasikirwa nechunhu, webhu webhu inomira kuyananisa kusvikira wadzosera foni yako kubatana. Verenga zvimwe pamusoro pekuti inoshanda sei mune yedu yega ficha.
Chinja iyo Wallpaper pane yako WhatsApp chat skrini
WhatsApp ine yakajairwa Wallpaper, inozoonekwa senge kumashure pane ako ese machats. Unogona kushandura iyi Wallpaper kunyange, uine sarudzo dzinosanganisira dzakasimba mavara, ako mapikicha pamwe nekuunganidzwa kwemifananidzo kubva kuWhatsApp pachayo.
iOS: Zvirongwa> Chats> Chat Wallpaper> Sarudza Wallpaper Raibhurari, Solid Colors kana Mifananidzo.
Android: Zvirongwa> Chats> Chat Wallpaper> Sarudza Wallpaper Raibhurari, Solid Colors, Garari, Default kana Kwete Wallpaper.
WhatsApp zvakavanzika matipi uye manomano
Batidza Mifananidzo Inonyangarika
Kuvhura Meseji Inonyangarika kuchaita chero meseji nyowani mune yekutaura inonyangarika mushure memazuva manomwe. Rangarira iwo mameseji achiri kungachengetedzwa kumwe kunhu. Unogona verenga zvakawanda nezve Kunyangarika Meseji mune yedu yakasarudzika ficha.
iOS & Android: Yakananga kutaura> Dzvanya pazita remunhu pamusoro pekutaura> Kudzima Meseji> On.
Inoda Chiso ID kana Kubata ID kuvhura WhatsApp
Kana iwe uchida kuchengetedzwa kwakapetwa pane ako WhatsApp machats, zvinokwanisika kune vashandisi veIOSUS kuseta yavo WhatsApp account inoda Face ID kana Kubata ID kuisirwa pakuvhura WhatsApp, kunyangwe kana yako kifaa yatovhurwa.
Iwe ucharamba uchikwanisa kupindura kumessage kubva kuzviziviso uye kupindura mafoni kana WhatsApp yakavharwa. Izvo zvakare zvinokwanisika kuseta iyo inguva yenguva iwe yaunoda iyo Screen Lock ficha yekurovera mukati.
iOS: Zvirongwa> Akaunti> Yakavanzika> Screen Lock> Chinja pane Inoda Chiso ID / Inoda Kubata ID> Sarudza iyo nguva yenguva (Pakarepo, mushure meminiti, mushure memaminitsi gumi nemashanu kana mushure meawa).
Maitiro ekuona uye kudzima ekupedzisira aonekwa
WhatsApp yekupedzisira yaonekwa ficha inokutendera kuti uone kana mumwe munhu akapedzisira kuongorora WhatsApp, uyezve bvumidza vashandisi kuti vaone pawakapedzisira kutarisa. Kana wekubata asina kuremara akaonekwa kwekupedzisira, ichaonekwa pasi pezita ravo pamusoro pehurukuro yakavhurika. Kuremadza kuoneka kwekupedzisira:
iOS & Android: Zvirongwa> Akaunti> Chakavanzika> Kuonekwa Kwekupedzisira> Chinja Hapana.
Viga zvikwekwe zvebhuruu
Aya mabhuruu matiki anogona kukuisa iwe munyika izere yedambudziko, kunyanya kana iwe ukasapindura ipapo ipapo uye mumwe munhu akaona kuti waverenga meseji yavo. Unogona kudzima, asi zvakakosha kuti uzive kuti kana ukadaro, haugone kuverenga maretiiti emameseji ako futi.
Vashandisi veApple: Kana iwe ukawana Siri kuti uverenge iwo meseji, matiki ebhuruu haazoonekwe saka iyi inogona kuve nzira yakanaka yekuverenga meseji pasina anotumira achiziva kuti unayo. Vashandisi veApple: Kana iwe ukaverenga mameseji ako mune zviziviso, anotumira haazowana iyo bhuruu zvikwekwe.
iOS: Zvirongwa> Akaunti> Yakavanzika> Bvisa maRegisiti Ekuverenga.
Android: Zvirongwa> Akaunti> Chakavanzika> Bvisa maRisiti.
Mira vanhu vaone mameseji ako
Wakambopfuudza foni yako kushamwari uye nekukasira uchivhunduka nezve meseji dzavaigona kuona kuuya nadzo? Hongu, hatina kana. Kune avo vane, iwe unogona kudzima mameseji ekuratidzira pane iOS saka chete iro zita rekubatana rinozoonekwa, pane nyaya yavo yehupenyu, kana iwe unogona kudzima zviziviso zvachose.
iOS: Zvirongwa> Zviziviso> Bvisa Ratidza Ratidziro / Zvirongwa> Zviziviso> Bvisa Ratidza Zviratidzo.
Android inopa huwandu hweanodzora ekuzivisa. Mukati meiyo WhatsApp app pachayo, unogona kudzima zvakakoshesa zviyeuchidzo - izvo zvinokwirira kumusoro kwechiso. Kana iwe unogona kudzora zviziviso padanho rehurongwa kuti uchengetedze ruzivo zvakavanzika kana kuzvibvisa zvachose.
Android: Zvirongwa> Notifications> Bvisa paKushandisa zviyeuchidzo zvepamusoro.
Viga mufananidzo wako
Iwe unogona kusada kuti munhu wese aone yako mbiri mufananidzo, kunyanya kana iwe uri chikamu chemapoka akati wandei kwausingazive munhu wese ari muboka. Kana kuti pamwe iwe unongofarira kuve zvishoma zvisinganzwisisike zvezuva racho. Chero nzira, unogona kusarudza kana munhu wese, pasina-mumwe, kana chete vako vokukurukura vaona mufananidzo wako.
iOS & Android: Zvirongwa> Akaunti> Yakavanzika> Mufananidzo wePikicha.
Maitiro ekuvharira WhatsApp kuonana
Pane zvikonzero zvakawanda nei ungangoda kuvharidzira wekutaurirana kuti tirege kubvunza kuti nei. Isu tinongokuzivisa iwe kuti kana iwe ukavharira munhu wekubata, haugone kutumira kana kugamuchira meseji, kana kufona kana kugamuchira mafoni kubva kwavari uye kunyangwe kana ukaavhura, hauzoone chero meseji dzinotumirwa kwauri uchiri dzakange dzakavharwa.
iOS & Android: Chats> Yakananga nhaurwa> Dzvanya pane wekubata chidzidzo kumusoro> Bhura pasi pasi kuzasi> Bvisa Kutaurirana.
Mira mifananidzo nevhidhiyo zvinowoneka mune yako gallery
Kugovera mafoto uye vhidhiyo paWhatsApp kwakanaka, asi iwe ungangodaro usade kuti iwedzerwe kufoni yako gallery. Pa Android, dhairekitori inogadzirwa mune gallery nekukasira, nepo iri paIOS, inochengetedza kukamera yako roll. Kana iwe usiri kuda izvo, iwe unogona kuzvidzima.
iOS: Zvirongwa> Nhaurirano> Toggle bvisa Kuchengeta Kamera Roll.
Android: Zvirongwa> Chats> Bvisa Show Show Media mu Garari.
Chinja otomatiki mufananidzo / vhidhiyo yekuchengetedza zvido zveimwe nhaurwa
Izvo zvakare zvinoita kuti uchinje otomatiki mufananidzo uye vhidhiyo zvaunofarira kune chaiwo chats. Iwe ungangoda kuve nechokwadi chekuti mifananidzo inogara yakachengetedzwa kubva kumhuri yako semuenzaniso, nepo iwe ungasarudza kusave nemifananidzo yese kubva kuboka kutaura mune yako gallery kana kamera roll.
Nhaurwa dzese dzinoiswa default (dzadzimwa) kunze kwekunge iwe wadzichinja imwe neimwe asi pane sarudzo yekugara uchichengeta mifananidzo nemavhidhiyo kubva kune waunofambidzana kana kusatombozvichengeta.
iOS: Chat> Yakanangana nhaurwa> Tinya pane vanobata kana chidzidzo pamusoro pechiratidziro> Sevha kuKamera Kutenderera> Gadza kuna Kugara kana Kusamboita.
Dhawunirodha uye utarise yako WhatsApp data mushumo
Kana iwe uchida kurodha pasi uye nekuona iyo data-inomiririrwa neWhatsApp inounganidza pauri, unogona dhawunirodha uye utarise mushumo wedata.
iOS uye Android: Zvirongwa> Akaunzi> Kumbira Akaundi Info> Kumbira Chirevo.
WhatsApp Chats matipi uye manomano
Referendi uye pindura kune yakatarwa meseji
Wakambotaura nezvezvinhu zvakawandisa mune WhatsApp chat uye unoda kupindura kune yakatarwa meseji? WhatsApp inokutendera kuti upindure kune imwe meseji, uchichiisa pamusoro pemhinduro yako kuti zviite nyore kumunhu kana vanhu vauri kutumira mameseji kuti uone zvauri kupindura.
iOS: Chats> Yakananga nhaurwa> Yakananga meseji> Rova zvakasimba kuruboshwe kurudyi pane meseji> Type mumhinduro yako uye rova ​​kutumira.
Android: Chats> Yakananga nhaurwa> Yakanangana meseji> Yakareba Press> Rova mhinduro.
Pindura kune rimwe boka meseji wega
Izvo zvinokwanisika kupindura kune iro boka meseji muchivande mune yako-kune-imwe chat, pasina kuwana imwe-kune-imwe chat iwe yauinayo nemunhu iyeye chaiye.
iOS: Dhinda uye bata meseji muboka rehurukuro> Sarudza Zvimwe> Pindura Pachivande. Iyo meseji ichaonekwa mune yako-kune-imwe chat pamwe neyemabhokisi bhokisi pazasi, sezvazvinoita kana iwe ukapindura kune yakatarwa meseji senge pamusoro.
Android: Dhinda uye bata meseji muboka rehurukuro> Sarudza iwo matatu mabhatani ari kumusoro kurudyi kona> Pindura Pachivande. Iyo meseji ichaonekwa mune yako-kune-imwe chat pamwe neyemabhokisi bhokisi pazasi, sezvazvinoita kana iwe ukapindura kune yakatarwa meseji senge pamusoro.
Chinja mazwi akashinga, iticic kana kuorora
Dzimwe nguva mamwe mazwi anoda kusimbiswa zvakanyanya uye mheremhere kepesi hautombozvicheka. Usatombo kunetseka, WhatsApp inokutendera kuti ugadzire chero ripi zvaro mazwi kana zvirevo zvaunoda zvakashinga, iticic, kana kurovera navo zvachose.
iOS & Android: Wedzera asterisk chero divi reizwi kana chirevo che *oneka*. Wedzera ruzasi rwepadivi pezwi kana chirevo che _tatsveyamisa mabhii_. Wedzera tildes kune rimwe divi reIzwi kana chikamu che ~ strikethrough ~.
Tumira meseji meseji
Hauna nguva yekunyora mhinduro refu kana kuti haugone kunetsekana nayo? Hapana dambudziko. WhatsApp inokutendera iwe kutumira mameseji ezwi kune vako vanobata izvo zvakanaka kana iwe uri kufamba kumwe kunhu semuenzaniso, uchiita uchingogara uchitaipa zvishoma kurwadziwa.
iOS & Android: Chats> Yakananga nhaurwa> Tinya maikorofoni kurudyi kwemessage bhokisi> Dhinda uye bata maikorofoni iwe uchinyora meseji yako. Yambiro, inotumira otomatiki mushure mekusimudza munwe wako.
Tumira voice note usina maoko
Kana iwe uchida kutumira izwi rekunyorera paWhatsApp, pane kunyora meseji, unogona kudzvanya uye kubata maikorofoni kurudyi kwebhokisi rekuisa meseji. Izvo zvakare zvinokwanisika kukiya maikorofoni bhatani pasi kuti iwe ugone kunyora yako meseji pasina kubata foni yako.
iOS & Android: Chats> Yakananga nhaurwa> Tinya maikorofoni kurudyi kwemessage bhokisi> Dhinda uye bata maikorofoni> Rova zvakasimba kumusoro kukiya. Iyo maikorofoni inozovharwa pane zvinyorwa kusvikira watumira iwo meseji.
Maka mamaki sekutaurirana
Wakambobuda kunze uye nezve, kuverenga nhaurwa uye ukakanganwa zvachose kupindura? Tinoita nguva dzose. Pane nzira yekumaka akakosha machats ane dot yekukuyeuchidza iwe kuti udzokere kwairi zvakadaro.
iOS: Chats> Rova zvakasimba kuruboshwe kurudyi> Maka seisina Kuverengwa.
Android: Long press chat> Vhura Menyu> Maka seisina Kuverengwa.
Nyora chat kumusoro
Kana iwe uchikwanisa kukanganwa kupindura mameseji, iwe unogona zvakare kupinha chat kuitira kuti igoonekwa kumusoro kwenyaya dzako dzese, kusanganisira pamusoro mitsva nekusaverenga chats, pane kungoimaka seisina kuverenga. Zvinongogoneka kupinha nhaurwa nhatu asi usanyanye kugutsikana nekupindura kwako.
iOS: Chats> Rova zvakasimba kuruboshwe kurudyi> Pin Chat.
Android: Nguva refu yekudhinda hurukuro> Dhinda pini kumusoro kwekona.
Nyarara chat kana group chat
Nhaurirano dzeboka dzinogona kuve dzakaipisisa. Unogona kusakwanisa kusiya nhaurirano, asi unogona kunyaradza zviziviso kuti usamutswa pese panokandwa munhu nemasendi avo maviri.
iOS: Chats> Vhura iyo chat chat / chat> Tinya chidzidzo kuti utore Group Info / Contact Info skrini> Mute> Sarudza kuti unoda kureba kwenguva yakareba sei.
Android: Chats> Vhura chat> Menyu bhatani> Mute.
Archive ako Chats
Archive Chat inokutendera iwe kuti uvanze hurukuro kubva kune yako Chats skrini. Iyo haina kudzima iyo chat - iyo inongobvumidza iwe kuti uibvise kubva kune yako huru yekukurukura skrini pasina kurasikirwa nayo, ichikubatsira iwe kuronga hurukuro dzako.
Unogona kuchengetera mapoka kana kutaurirana kwakasarudzika, uye iwo anozonyangarika kusvikira iwe wadonha kubva kumusoro kweChats kuratidza uye tora iyo Archived Chats tebhu. Iwe unogona zvakare kuchengetedza zvese chats.
iOS: Chats> Yakananga hurukuro> Rova kurudyi kuruboshwe> Archive / Zvirongwa> Chats> Archive Dzese Nhaurwa.
Android: Chats> Yakareba dzvanya pane chat> Dhinda iro rekuchengetedza dura kumusoro kurudyi kwescreen
Dzorera kumusoro hurukuro dzako
Kuti uve nechokwadi chekuti haurasikirwe nechero dzekutaurirana kwako kana ukarasa mudziyo wako kana ukachinja zvishandiso, ita shuwa kuti unosimudzira machats ako kuCloud kana Google Drive. Nehurombo kana iwe uchichinja pakati peIOS uye Android uye zvinopesana, hapana nzira yakapusa yekufambisa machata ako pamusoro saka gadzirira kuarasa. Zvakare, ziva kuti dzakachengetwa chats hadzisisina encrypted.
iOS & Android: Zvirongwa> Chats> Chat Backup> Back Up Izvozvi
Bvisa machats ese
Kana iwe uchida kuchengeta vese vauri kutaura navo paWhatsApp yako asi iwe uchida kujekesa meseji dzako, WhatsApp inokupa iri nyore sarudzo yekuita izvi.
iOS: Zvirongwa> Chats> Bvisa Chats Dzese.
Delete ese machats
Unoda yakachena WhatsApp slate? Tanga kubva pakutanga nekudzima ese ako epairesi. Zvinoreva kuti iwe uchabvisa zvese zvese hazvo, kwete chete zvirimo zveyekutaurirana asi uchafanirwa kutanga nhaurwa nyowani kune wese wekutaurirana zvakare.
iOS: Zvirongwa> Chats> Delete All Chats.
Delete kana bvisa chaiko chat
Kana iwe uchida kujekesa kana kudzima yakatarwa nhaurwa pasina kurasikirwa yako ese ehurukuro, ipapo zvinokwanisika kuita izvi futi.
iOS: Chats> Yakananga hurukuro> Rova kurudyi kurudyi> Dzvanya madota matatu> Bvisa Chat / Delete Chat.
Android: Chats> Yakananga kutaura> Dzvanya menyu kumusoro kurudyi> Zvimwe> Bvisa Chat
Bhukumaka mameseji akakosha
Mamwe mameseji akakosha kupfuura mamwe. Kunyangwe iri zuva raunofanira kuyeuka, kana resitorendi yakanaka yawakakurudzirwa. Izvo zvinokwanisika kubhukumaka aya mameseji uye wozviwana zvese zviri nyore muchikamu cheNyeredzi Yemashoko.
iOS: Chats> Yakananga nhaurwa> Yakananga meseji> Dhinda pombi kana kubatirira pasi uye pinda nyeredzi.
Android: Chats> Yakananga nhaurwa> Yakananga meseji> Batisisa pasi uye pinda nyeredzi.
Delete yakatarwa meseji mukati me chat
Sezvo iwe uchigona nyeredzi yakatarwa meseji mukati me chat, iwe unogona zvakare kudzima yakatarwa meseji mukati me chat. Iwe unogona zvakare “Delete munhu wese” asi iwe unofanirwa kuita izvi mukati me1 awa, maminetsi masere nemasekondi gumi nematanhatu.
Kusarudza Delete kune wese munhu kunozogumawo nemeseji inoonekwa mune chat ichiti meseji yakabviswa iyo kunyangwe ichitaridzika kunge inofungira, inogona kunge iri nani pane chero meseji yawakatumira pakutanga.
iOS & Android: Chats> Yakananga kutaura> Dzvanya uye ubatisise pane chaiyo meseji iwe yaunoda kudzima> Dzvanya Delete.
Tumira meseji yeruzhinji pachivande
Wakambove nemanheru emahara uye waida kubvunza akati wandei eshamwari dzako kana ivo varipo vasina kuvhura yega yega chat kuti uvabvunze zvakasiyana?
Iwe unogona kutumira meseji yekuparadzira kune runyorwa rwevanosangana nayo ichiita sekunge wakavabvunza ivo pachavo. Yakakura yekuchengetedza nguva, inotyisa kana vese vakapindura hongu.
iOS: Chats> Broadcast Lists> Nyowani Chinyorwa> Wedzera mazita.
Android: Chats> Menyu> New Broadcast.
Tsvaga kuti wakatariswa kwenguva yakareba sei
Hapana chimwe chinhu chinogumbura kupfuura kuona iwo matiki ebhuruu achioneka pasina mhinduro inotevera munguva pfupi yapfuura. Kana iwe uchida kuzvitambudza zvishoma uye uone kuti meseji yako yakaverengwa riinhi uye kuti wakatariswa kwenguva yakareba sei, unogona. Hatizvipe zano zvakadaro.
iOS: Chats> Yakananga nhaurwa> Yakanangana meseji> Rova kurudyi kuruboshwe.
Android: Chats> Yakananga nhaurwa> Yakananga meseji> Dhinda uye bata> Tinya iyo info "i" icon kumusoro.
WhatsApp zviri nyore uye matipi ekuzivisa uye manomano
Tora Siri kuti uverenge yako yekupedzisira meseji, pindura kana kutumira mutsva meseji
Vashandisi veApple vanogona kuwana Siri kuverenga chero asina kuverengwa WhatsApp mameseji, kana uchinge wawana akatevera nhanho kupa mubatsiri wepamoyo kuwana. Iwe unogona zvakare kuwana Siri kuti upindure kune iro meseji nezwi rako kana kutanga meseji nyowani kune waunobata.
iOS: "Hei Siri, verenga yangu yekupedzisira WhatsApp meseji"> "Hei Siri, tumira WhatsApp meseji kune [bata]"
Wona machats achangopfuura pasina kuvhura WhatsApp
Vashandisi veApple vanogona kuona kuti ndeapi macustomer avasina kuverenga mameseji kubva vasina kuvhura iyo WhatsApp app nekuwedzera iyo WhatsApp Recent Chats widget kune yavo kifaa. Kusvikira kumana ehurukuro dzako dzichangoburwa dzinoonekwa mukati meyekuchata widget yazvino kana iwe ukasvetuka kuruboshwe uchienda kurudyi kubva kukona yako yekumba skrini kana kukiya skrini.
Widget inoratidza denderedzwa reprofile pikicha icon ine huwandu hwekuti mangani asina kuverengwa machats aunove nawo kubva kune iwo chaiwo kutaurirana. Unogona kudzvanya pane chat iwe yaunoda kuverenga uye WhatsApp ichavhura pane iyo chaiyo chat.
iOS: Rova zvakasimba kuruboshwe kurudyi kubva kukiya rako rekukiya kana muhombe skrini yako yekumba> Bhura pasi pasi kuHedheni icon pazasi> Wedzera iyo WhatsApp Recent Chats icon> Gadzirisazve marongedzero emajeti ako.
Panogona kunge paine vamwe vekutaurirana vaunoda kuziva ipapo kana vari kukufonera kana kukutumira mameseji. Kuita shuwa kuti havasanganisire mukati mechaunga, unogona kushandura yavo chaiyo toni matoni kuti iwe uone kana iye chaiye munhu wacho akutumira iwe meseji kana iri WhatsApp iri kukusheedza iwe.
iOS & Android: Chats> Yakananga kutaura> Tinya pazita rekubatana kumusoro> Tsika Toni.
Tora mapfupi ekutaurirana chaiko
Iwe une vashoma vekuwedzera vanhu vaunotaura navo nguva dzese kuburikidza neWhatsApp? Isu tinoitawo. Unogona kugadzira nzira pfupi yekutaura kwakananga paApple, zvichiita kuti zvive nyore kuwana iwo machats aunoda nguva dzese.
Android: Chats> Yakananga kutaura> Menyu> Zvimwe> Wedzera Shortcut kana Chats> Dhinda uye ubate yega yega chat> Menyu> Wedzera Chat Shortcut.
Wedzera mazuva kukarenda yako otomatiki
Kana iwe uchikwanisa kukanganwa misi yakataurwa mumitauro dzakasiyana siyana, zvinokwanisika kuti ugadzire wega chiitiko kubva kuWhatsApp paIOS.
iOS: Dhinda uye ubatise zuva mukati mehurukuro> Gadzira Chiitiko.